प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे बाबुरामले यस्तो भने | Sawal Nepal |The Power of Information
प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे बाबुरामले यस्तो भने
सवाल नेपाल २०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार १८:३६ मा प्रकासित
शुक्रबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा डा. भट्टराईले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाहले २०६२ माघमा घोषणा गरेको नगरपालिका निर्वाचन विथोल्नका स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आग्रह गरेको बताए ।
१२ बुंदे समझदारीमा नै काँग्रेस लगायतका सात दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र तत्कालिन माओवादी फौजि ढंगले अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए । उनले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड) को बानी नै सानो कुरालाई पनि बढाई चढाई गरी प्रस्तुत गर्ने बानी छ । उत्तेजना फैलाउने स्वभाव छ । १२ बुँदे समझदारीको ड्राफ्ट गर्ने म नै हुँ । मलाई याद छ । उहाँहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले र हामीले फौजी ढंगले प्रहार गर्ने सहमति भएको थियो ।’
तत्कालीन समयमा आफूहरुले युद्धविराम भंग गरेर जाने निर्णय गर्दा गिरिजाले ठोक्नुपर्‍यो भनेको भट्टराईले बताए । ‘पुसको अन्तिमतिर आन्दोलन राम्रोसँग हुन सकेन । हामीले युद्धविराम भंग गरेर जाने निर्णय गर्दा उहाँ (गिरिजा) ले अझै ठोक्नुपर्‍यो भनेर चाँही भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘लौन कारवाही अगाडी बढाउनुप¥यो उहाँले भनेको हो म पनि साक्षी थिए । एक दुई पटक भनेको कुरालाई युद्धभरी भनेजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नुभएन् । नगरपालिका निर्वाचन विथोल्न अलिअलि फौजी कारवाही बढाउनुप-यो भन्नुभएको हो ।’
प्रचण्डले भनेका थिए , ‘कोइराला र मेरोबीच लगातारजस्तो, झन्डै झन्डै दिनदिनैजस्तो कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई फौजी आक्रमण अझै बढाइदिनुपर्‍यो, सदरमुकाम हान्नुपर्‍यो, अझै ठूल्ठूलो हमला गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो। यो बढो विचित्रको थियो। यस्तो संसारमा कमै हुन्छ।’ प्रचण्डका उक्त अभिव्यक्तिप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालीन समयको काँग्रेसको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् । रातो पाटि बाट साभार
स्थानीय तहबाट राहत दिन ढिलाइ
प्रदेश नं १ मा ५९ जनाको स्वाब टेष्ट, ४२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ